I-Koh Samui yaseThailand ivulwa kwakhona kubahambi baMazwe ngaMazwe abaGonyelweyo | Iindaba zokuhamba eThailand
Ikhaya » izithuba » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zokuhamba eThailand » I-Koh Samui yaseThailand ivulwa kwakhona kubahambi baMazwe ngaMazwe abaGonyelweyo
Iindaba zeenqwelo moya • Iindaba zesikhululo senqwelomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zokuhamba ngeshishini • Imicimbi kaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Iindaba zeShishini lokuBuka iindwendwe • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe • omnye • ukwakha uhambo kwakhona • Iindaba ezijongene noKhenketho • Iindaba zokuhamba eThailand • Iindaba zoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziShukumayo
I-Koh Samui yaseThailand ivulwa kwakhona kubahambi baMazwe ngaMazwe abaGonyelweyo
I-Koh Samui yaseThailand ivulwa kwakhona ukuze kugonywe abahambi bamazwe aphesheya
I-SKÅL yamkela ukuvulwa kwakhona kwesiqithi sesibini ngobukhulu eThailand ukuze kugonywe abahambi bamanye amazwe kwinkqubo yeSAMUI + PLUS.
Abahambi kufuneka bahambe besuka kwilizwe elivunyiweyo, kwaye kufuneka babekwelo lizwe kungekho ngaphantsi kweentsuku ezingama-21 ezilandelelanayo.
Ukufika kwabantu abadala kufuneka kugonywe ngokupheleleyo isitofu sokugonya se-COVID-19 esingekho ngaphantsi kweentsuku ezili-14 ngaphambi komhla wokuhamba.
Ukufika kudlula kwisikhululo seenqwelomoya saseBangkok iSuvarnabhumi kwaye ugqithisele kwisikhululo seenqwelomoya i Bangkok Airways ngenqwelomoya eya eKoh Samui ngendlela etywiniweyo.
Samui - Thayilendi Isiqithi sesibini ngobukhulu kunye neziqithi ezikufutshane iKoh Phangan kunye neKo Tao - zivulelwe ukugonya abahambi bamazwe aphesheya ngaphandle kokuvalelwa kwisikim esitsha seSAMUI + sokhenketho esijolise ekuqaliseni ishishini lokhenketho lweziqithi olonakaliswe ngubhubhane weCovid-19.
Imodeli yeSamui + imele iinyanga zokucwangcisa kunye nentsebenziswano esondeleyo phakathi kwamaqumrhu aphambili ezokhenketho eThailand, i-TAT [Umbutho wezoKhenketho waseThailand], i-THA [Umbutho wamahotele waseThailand], i-TAKS [uMbutho wezoKhenketho waseKoh Samui], urhulumente kunye necandelo labucala, elinabameli uzimase umsitho wokuphehlelelwa izolo ebusuku kwi-Banana FanSea Resort kwi-Samui's Chaweng Beach eyaziwayo.
Imodeli ye-SAMUI + Plus-Ngokujonga nje, isebenza njani kwiindwendwe zamazwe ngamazwe ezigonyelweyo:
Isatifikethi sokuNgena (i-COE).
Uvavanyo olubi lwe-RT-PCR COVID-19 hayi ngaphezulu kweeyure ezingama-72 ngaphambi komhla wokuhamba.
Abahambi abangaphantsi kwe-18 abadingi bungqina bokugonywa, kodwa kufuneka bahambe nabazali abagonywe ngokupheleleyo okanye abagcini kwaye babonise uvavanyo olubi lwe-RT-PCR COVID-19.
Umgaqo-nkqubo we-inshurensi ogubungela iindleko ze-COVID-19 ubuncinci $ 100,000.
Kuya kufuneka uhlale kuphela kwihotele evunyiweyo ye-ALQ kubusuku bokuqala be-7 bokuhlala kwabo.
Unokuhlala kwihotele evunyiweyo ye-SHA + Plus okanye kwilali yabucala eKoh Samui, eKoh Phangan okanye eKoh Tao kubusuku obuzayo be-7 bokuhlala kwabo kwi-Koh Samui.
Zonke ii-airline kunye nokubhukisha ihotele kufuneka kubhukishwe kwangaphambili kwaye kuhlawulwe kwangaphambili kwaye kubandakanya intlawulo yovavanyo olunyanzelekileyo lwe-3 x RT-PCR COVID-19.
Kuya kufuneka ukhuphele kwaye ufake usetyenziso lokulumkisa.